Dc Power Adapter - muumbi, fekitari, mutengesi kubva kuChina
5V 8A desktop inoshandisa magetsi 5V8A inodzima magetsi magetsi tsananguro: Yakanyanya kuvimbika, yakasarudzika AC yekukanda / yakazara yakazara imwe inobuda magetsi magetsi. Iyo AC / DC Power Adapter ine vhoriyamu yekuisa ye100-240V AC uye yakabuda ye5V, 8A DC. A EU 3pole AC tambo inosanganisirwa.5v 8a magetsi...
Ko magetsi magetsi anotendeuka pasina mamaboard
9v 1.5a 1500ma Ac Dc Power Adapter 9V 1.5A simba adapter simba: Iyo mhando yakanaka switching `wall wart` AC kune DC 9V 1500mA magetsi magetsi. Aya ndiwo switch mode magetsi ekupa izvo zvinoreva kuti kuburitsa kwacho kunodzorwa ku9V uye kugona kunogoneka ikozvino kwakanyanya (1500mA) .efficency iri pamusoro pe88%....
24V 0.5A 500MA Power Adapter 24V DC Power Adapter (500mA Kuburitsa, 120V AC Input) Tsananguro: Iyo JYH37-2400500-Bz magetsi ndeye 24V DC 500mA magetsi magetsi ayo anogadzirwa kuti asangane neV Level VI simba rekushandisa zvakanyanya. Aya anotevera kuchengetedzeka maratidziro anoonekwawo pane magetsi ekushandisa,...
simba adapter kutsiva plugs
24v 1a 1000ma Ac Dc Power Adapter 24v 1a 1000ma Ac Dc Power Adapter Tsanangudzo: 24v 1a magetsi anogadzirisa akakodzera Set yepamusoro bhokisi, dijitari kamera, vhidhiyo mutambo mutambi, magetsi magetsi, CD, DVD player, LCD Monitor, Hard Disk, Kukurukurirana Matinari, Chero Chipenga chinoshandiswa, Muchina, CCTV...
36v 0.5a 500ma Ac Dc Power Adapter 36V 500mA simba adapta yesimba: 36V DC 500mA inoshandura magetsi magetsi ayo akagadzirirwa kusangana neV Level VI simba rekushandisa zvakanyanya Aya anotevera kuchengetedzeka maitirwo anoonekwawo pane magetsi magetsi, kusanganisira UL, cUL, FCC, uye RoHS kutevedzera.100% yakakwira...
12v 0.5a 500ma Ac Dc Power Adapter 12V 0.5mA simba adapta yemagetsi: T yake idiki, yakakwira mhando, switchmode yakagadziriswa magetsi nekubudiswa kwakagadzika, 12V, 0.5A, 6 watts inoenderera. Iyo ine yakagadzirirwa AC plug sezvakaratidzwa. Iyo idiki zvekuti inogona kukwana parutivi-ne-parutivi mune chero madziro plug...
EU / US / UK / AU plug 5v 4a Adapter Charger 5V 4A Ac Dc Power Adapter Tsanangudzo: Nyemberi upamhi, madziro akagadzikwa Powermaster switch mode 5V DC 4A magetsi magetsi anokwanisa kushandiswa kumhiri kwe100V-240V, ichiita kuti ive yakakodzera kushandiswa kana uchifamba. Kuve dhizaini dhizaini, iyo adapta inokodzera...
magetsi adapta vs magetsi
20V 0.85A Wall Charger Power Supplies 20V 0.85A Wall Chidimbu Simba Rinopa Tsanangudzo: Yakagadzirwa naJuyuanhai Magetsi emhando yepamusoro magetsi emagetsi, kubuda ndeye 20V0.85A. Pfuura UL / CE / FCC / ROHS yakajairika, uye zvakare ipfuure 15KV ESD bvunzo. Yedu nyanzvi 20V0.85A yemadziro charger magetsi...
48W 19V2.5A Desk Pamusoro Simba Rino Adapter
48W 19V2.5A Desk Pamusoro Simba Rino Adapter 19V2.5A 48W Desk Pamusoro Simba Rinopihwa Adapter Tsanangudzo: Iyo Ultra-compact 19v 2.5a desktop yemagetsi inopa magetsi akabuda kunze uye inopa inosvika 48W yemagetsi anogara achibuda.90-264VAC, 19V 2,5A ac dc magetsi adapta ane 5.5 x 2.1mm DC Barrel Connector uye North...
magetsi adapta anoita amp zvine basa
20V1.8A AC DC Masimba Emagetsi Magetsi 20V1.8A 36W AC DC Magetsi Magetsi Rinopa Tsanangudzo: Iyi 20V1.8A Power Supplies inogona kushandiswa kwemagetsi chishandiso, bhaudhi mutauri, robot kuchenesa, masutu chigaro, humidifier, muto wekudzivirira, kofi muchina, idiki yemidziyo yemidziyo yekushandisa, chigunwe...
36v 1.5a LED Mwenje magetsi ekugadzirisa magetsi adapta 36V1.5A AC / DC magetsi adapta Tsanangudzo: 1. Ukave nehuwandu hwepasi rose vhoriyamu vhidhiyo 100-240 Vac 50 / 60Hz 0.5A, ndeye AC socket C6 / C8 / C14 inogona kuzadzisa zvaunoda zvakasiyana munyika dzakasiyana. 2. 36V1.5A Power Adapter inogona kushandiswa mune...
Wall inomira inoshandura magetsi adapta 5V1.5A 7.5W
5-7.5W Wall inomira inoshandura magetsi adapta 5-7.5W Wall inomira inoshandura simba adapter tsananguro: 5V1.5A 5V2A 5V2.5A 5V3A 5V 4A zvese zvakanaka unoshandura `wall wart` magetsi magetsi. AC Power plug inoshandurana plugs plugins universal yekufamba adapta 18V 1A 5V 3A switching Power AC / DC Adapt Center-yakanaka...
Adapter cyprus 5V5A Desktop Simba Adapter
5V 5A desktop switching magetsi 5V5A inodzima magetsi magetsi tsananguro: Yakanyanya kuvimbika, yakasarudzika AC yekukanda / yakazara yakazara imwe inobuda magetsi magetsi. Iyo AC / DC Power Adapter ine vhoriyamu yekuisa ye100-240V AC uye yakabuda ye5V, 5A DC. A EU 3pole AC tambo inosanganisirwa.5v 5a magetsi magetsi...
Universal Use 5V5.5A Desktop Simba Adapter
5V 5.5A desktop switching magetsi 5V5.5A inodzima magetsi magetsi tsananguro: Yakanyanya kuvimbika, yakasarudzika AC yekukanda / yakazara yakazara imwe inobuda magetsi magetsi. Iyo AC / DC Power Adapter ine vhoriyamu yekuisa ye100-240V AC uye yakabuda ye5V, 5.5A DC. A EU 3pole AC tambo inosanganisirwa.5v 5.5a magetsi...
5V 6A desktop inoshandisa magetsi 5V6A inodzima magetsi magetsi tsananguro: Yakanyanya kuvimbika, yakasarudzika AC yekukanda / yakazara yakazara imwe inobuda magetsi magetsi. Iyo AC / DC Power Adapter ine vhoriyamu yekuisa ye100-240V AC uye yakabuda ye5V, 6A DC. A EU 3pole AC tambo inosanganisirwa.5v 6a magetsi...
5V 8.5A desktop switching magetsi 5V8.5A inodzima magetsi magetsi tsananguro: Yakanyanya kuvimbika, yakasarudzika AC yekukanda / yakazara yakazara imwe inobuda magetsi magetsi. Iyo AC / DC Power Adapter ine vhoriyamu yekuisa ye100-240V AC uye yakabuda ye5V, 8.5A DC. A EU 3pole AC tambo inosanganisirwa.5v 8.5a magetsi...
5V9.5A desktop switching magetsi 5V9.5A inodzima magetsi magetsi tsananguro: Isu tinotora pasi rese kushandisa magetsi ekufambisa 100-240V AC ye5V9.5A magetsi adapta, uye iyi mhando desktop desktop simba adapta yekushandisa shandisa C6C8C14 socket, inogona kushandiswa munyika zhinji pasi. 48W magetsi adapta ane...
Imwe Yakaburitswa 9V7A Universal 100Vac-240Vac Power Adapter
9V7A desktop switching magetsi 9V7A LCD inotarisa tsanangudzo yemagetsi kupa: Yakanyanya kuvimbika, yakasarudzika AC yekukanda / yakazara yakazara imwe inobuda magetsi magetsi. Iyo AC / DC Power Adapter ine vhoriyamu yekuisa ye100-240V AC uye yakabuda ye9V, 7A DC. Iyo EU 3 pole AC tambo inosanganisirwa. 9v 7a magetsi...
Kutsiva 24V ac dc magetsi adhitaivha Kutsiva 24V ac dc simba remagetsi rinoshandura : Izvi zvinhu zvinozivikanwa kune vatengi vedu, iyo yakavakwa neyekuisa / kubuda kunze kwekudzivirira kwemagetsi, kuisa / kubuda kunze kwekudzivirira ikozvino, pamusoro pekudzivirira kwekushisa, pamusoro pokudzivirira kwesimba kupfupi...
24V4.5A Simba Adapter Kubva Kunogadzirwa Anogadzira
24V4.5A magetsi adapta magetsi 24V4.5A kutsanangurwa kwemagetsi JYH desktop Power adapter ine univ ersal poda voltage 100-240Vac, ine yakanyanya usahihi pane voltage kugadzikana nguva dzose cur r kubuda. Zvekushandisa zvemukati, magetsi adhiraivha anogona kushandiswa muzvigadzirwa zvakawanda zveimba, senge yako...
Dc Power Adapter DC Power Adapter US Power Adapter Ac Power Adapter 9v Ac Power Adapter 12v 2amp Power Adapter Ac Power Adapter plug Multi Power Adapter